Global Voices teny Malagasy » Sarimihetsika 15 Izay Miresaka Ny Fifandraisana Saropady Misy Amin’i Taiwan (Taioàna) Sy Japàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Aogositra 2017 6:48 GMT 1	 · Mpanoratra I-fan Lin Nandika Arimalala
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Taiwan (ROC), Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Pikantsary avy amin'ny horonantsary tamin'ny 2014 “Riding the Breeze” (Mitaingin-drivotra)
Anatin'ny teboka samy hafa ao anatin'ny tantara, zanatanin'i Holandy i Taioàna (1624 – 1662) Espaina (1626-1642), ny taranak'andriana Qing avy any Shina (1683-1895) ary Japàna (1895-1945).
Toy ny mpanjanaka rehetra, nogiazan'i Japàna ny loharanon-karena avy any Taioàna. Na izany aza, nanafaingana ny fampanarahana toetrandro ilay nosy ihany koa ny fanjahanan'ny Japoney, tamin'ny fampandrosoana fotodrafitrasa ary ny fampiharana ny rafitra fanabeazana sy rafi-pitantanan'ny governemanta.
Araka izany, fony nandositra tanyTaioàna tamin'ny 1949 ny governemantan'ny Kuomintang (KMT) avy any amin'ny Repoblikan'i Shina, taorian'ny nandresen'ny tafika kaominista azy ireo nandritra ny ady an-trano tany Shina ary nametraka tamin-kerisetra ny fahefana  tao niaraka tamin'ny lalàna miaramila (1949 – 1987), nahazo toerana ny fahatsapana alahelo momba ny fanjanahantany japoney, na niteny tamin'ireo teratany Taioàney aza ny governemanta miaramila KMT hoe tokony hankahala an'i Japàna izy ireo noho ny fanjanahan'izy ireo an'i Taioàna sy ny fananiham-bohitra nataony tany Shina.
Nandritra ny ady tany Korea tamin'ny fiandohan'ny taona 1950, niaraka niasa ny firenena roa mba hanome vatsy ho an'ny tafika Amerikana. Nitohy io fiarahana miasa io mandra-pametrak'i Japàna fifandraisana mazava ara-diplaomatika amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina ary nanapaka ireo fifamatorana ofisialy tamin'ny Repoblikan'i Shina ao Taioàna tamin'ny 1972 (vokatry ny politika Shina iray tsy mivaky )
Hatramin'ny faran'ny lalàna miaramila tany Taioàna tamin'ny 1987 sy ny nahafatesan'ny Amperora Japoney Showa tamin'ny 1989, nisy fifanakalozana ara-kolontsaina sy olom-pirenena bebe kokoa teo amin'i Taioàna sy Japàna momba ireo fahatsiarovana mialoha sy nandritra ny ady nifanaovan-dry zareo, ary nanjary lohahevitr'ireo fikarakaràna isankarazany, tantara foronina na tsy foronina mitovitovy amin'izany ilay fifandraisana mananosarotra. Ireto horonantsary manaraka ireto, avy amin'ireo tale Taioàney sy Japoney, nalahatra araka ny vanim-potoana dia tsy vitan'ny hoe manolotra ny fihetsehampo marefo, saropady ary matetika tratry ny tsindry momba ny fitsipiky ny fanjanahantany Japoney tany Taioàna fotsiny, fa mamaritra indray koa ny fifandraisana lasa sy ankehitriny misy eo amin'ny Taioàney sy ny Japoney.
Samy notontosain'i Toon Wang,  Taioàney mpamokatra horonantsary izy roa ireo.
“Strawman” dia fanarabiana an'ireo Taioàney tantsaha mahantra sasany tamin'ny andro faran'ny fifehezan'ireo Japoney nahita baomba iray tsy nipoaka nalatsaky ny fiaramanidina mpiady Amerikana.
‘Hill of No Return’ dia tantaram-pitiavana mampalahelo, novitaina tamin'ny 1920 fony Taioàna mbola zanatanin'i Japàna. Mifantoka amin'ireo Taioàney mahantra mpitrandraka volamena izay maty tany aminà toeram-pitrandrahana volamena tany avaratr'i Taioàna izy io.
Ity horonantsary fanadihadiana, notontosain'i Liang-Ying Guony, Taioàney mpamokatra saerimihetsika, dia mitantara ny tantaran'ireo ankizy Taioàney mpiasa, antsoina hoe “shonenko’ amin'ny teny Japoney, izay nanampy tamin'ny fanamboarana fiaramanidina mpiady tao amin'ny tafika an-dranomasin'i Japàna tany Koza, Kanagawa.
Nanome aingam-panahy ho anà resadresaka maro izy ity, ary nitarika tanora Taioàney sasantsasany hahita  fa ireo raibeny dia efa shonenko fahiny rehefa noresahan-dry zareo tamin'izy ireny ny momba ilay horonantsary.
4. Telo nefa iray: ‘Taiwan Jinsei’  (2009), ‘Taiwan Identity’  (2013) ary ‘Taiwan Banzai’ (hivoaka amin'ny 2017)
Aingam-panahy nalaina avy tamin'ny sarimihetsika Atsuko Sakai, novokarin'i Ming-Liang Tsai , izay Japoney mpanao gazety ihany koa, nitsidika an'i Taioàna tamin'ny 1998. Gaga izy nahita ireo Taioàney zokiolona miteny Japoney ary nanomboka nianatra ny tantaran'ny nanjanahan'i Japàna an'i Taioàna. Ireo tantara roa voalohany ao amin'ilay tantaran'ny telo nefa iray dia mandrakitra ny tantaran'ny taranaka izay niaina teo ambany fanjanahan'ny lalàna Japoney.
Ity sarimihetsika malaza notontosain’i Te-Sheng Wei , Taioaney mpamokatra sarimihetsika ity, dia momba ilay Japoney mpampianatra izay raiki-pitia taminà vehiavy Taioàney, nefa voatery niverina tany Japàna avy any Taioàna taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Nanoratra taratasim-pitiavana fito ho an-dramatoakely izy, nefa tsy nisy lasa ireo. Rehefa maty izy 60 taona taty aoriana, hitan'ny zanany vavy ireo taratasy ary nanapa-kevitra ny handefa azy ireo ho any Taioàna izy, any amin'ny adiresy taloha nipetrahan'ilay ramatoa, Cape No.7.
Nandrehitra adihevitra nahatezitra tao Taioàna ity sarimihetsika ity satria nisy olona sasany nanambara fa maneho fifikirana tafahoatra amin'i Japàna ilay izy. Nosakanana tao amin'ny taniben'i Shina  ilay izy nony farany, rehefa nahazo aingam-panahy tamin'ilay sarimihetsika ilay Japoney mpanoratra Shuichi Yoshida  ary nanoratra ny bokin-tantara ‘Ru’, momba ny fanorenana ilay rafitra fiarandalamby haingam-pandeha tany Taioàna, nampian'ny orinasa Japoney iray. Nivoaka tamin'ny 2012 ilay boky.
6. ‘Seediq Bale I sy II’  (2011 sy 2012)
Tsy toy ilay sarimihetsika voalohan'i Wei, ireo sarimihetsika roa ao anatin'ity andian-tantara ity dia momba ny Fikomiana Musha  — tamin'ny 1930, ny Seediq, vondronà teratany any amin'ny faritra Musha, nanafika ny Japoney mpifehy ho valin'ny famoretana nataon'ny manampahefana Japoney. Na niverina nahazo ny fifehezana ireo faritra ireo aza ny tafika Japoney taorian'ny ady mangotraka, anisan'izany ny fanjerana baomba mandatsa-dranomaso, nanery azy ireo hanova ny politikany manoloana ny mponina ao Taioàna ny zava-nitranga.
Ity sarimihetsika novokarin'i Umin Boya, Taioàney mpanatontosa ity, dia notsoahina avy amin'ny tantara marina anà ekipa mpilalao baseball tamin'ny sekoly Taioàney ambaratonga faharoa izay nahazo ny toerana faharoa tamin'ny fiadiana ho tompondakan'ny Baseball any amin'ny Sekoly Japoney ambaratonga faharoa nandritra ny fanjahanan'i Japàna an'i Taioàna. Niavaka ilay ekipa tamin'io fotoana io satria nahitàna ny Han Taioàney, teratany Taioàney, sy Japoney mpianatra, ary nitondra fanampiana tamin'ireo adim-poko taminà vanim-potoana politika nanahirana.
Ity rakitsary avy amin'ilay Japoney mpamokatra, Koji Hagiuda, ity dia rakitsarinà fivahinianana mikasika vehivavy Japoney efa zokinjokiny sy tanora Taioàney tovovavy izay miaraka mitaingina bisikileta any Taioàna.
Taratry ny fizahantany misy amin'ireo firenena ireo, izay nivoatra haingana tao anatin'ny taona vitsy, ny ‘Riding the Breeze': Tamin'ny 2016, Japoney mpizahatany nanodidina ny 1.9 tapitrisa  no nandeha tany Taioàna, ary Taioaney mpizahatany nanodidina ny 4.3 tapitrisa  no nandeha tany Japàna.
9.‘Heverin'i Neny Ho Adala Aho Manambady Bandy Japoney’ (2017)
Nalaina avy taminà tantara marina, ity sarimihetsika notongosain'ilay Japoney mpamokatra, Akihisa Yachida, ity dia momba ny vehivavy Taioàney sy lehilahy Japoney izay nihaona tamin'ny aterineto ary nivady nony farany. Maneho ny taratry ny fironana tsy mitsaha-mitombo amin'ny fifandraisana misy eo amin'ireo firenena roa ireo izany, izay mitranga amin'ny samy olona tsirairay.
“Wansei” dia manondro ireo Japoney izay teraka teo ambany fitondràn'ny Japoney mpanjanaka. Momba ilay Wansei mpandoko malaza, Tetsumi Tateishi, ilay sarimihetsika fanadihadiana, notontosain'ilay Taioaney mpamokatra, Liang-Yin Kuo, sy ilay Japoney mpamokatra, Shuhei Fujita.
11. ‘Aorian'ny Lohataona, ny Fianakaviana Tamaki’ (2016)
Ny lahatsary fanadihadian'i Yin-Yu, ilay Taioàney mpamokatra sarimihetsika, amin'ny lafiny iray, dia mitantara ny tantaran'ireo Taioàney izay namporisihana mba hifindra any Okinaoà nandritra ny fanjanahan'ny Japoney saingy tsy afaka niverina ho any Taioàna taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Nanjary tsy nanana zom-pirenena izy ireo nandritra ny am-polo taona maro.
Ity sarimihetsika novokarin'i Ya-Li Huang, Taioaney mpanatontosa ity, dia mikasika fiarahamonina ara-tononkalo nipoitra tany amin'ny taona 1930 izay nampiasa fomba fiteny miendrika tononkalo mba handrodanana ny fanjanahana ara-kolontsaina ary hanovàna ny literatiora any Taioàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/30/103819/
 nametraka tamin-kerisetra ny fahefana: https://en.wikipedia.org/wiki/White_Terror_(Taiwan)
 politika Shina iray tsy mivaky: https://en.wikipedia.org/wiki/One-China_policy
 Toon Wang,: http://www.imdb.com/name/nm0911042/
 i Te-Sheng Wei: https://en.wikipedia.org/wiki/Wei_Te-sheng
 Nosakanana tao amin'ny taniben'i Shina: https://movie.douban.com/subject/3158990/discussion/10470402/
 ‘Seediq Bale I sy II’: http://www.imdb.com/title/tt2007993/
 Fikomiana Musha: https://en.wikipedia.org/wiki/Musha_incident
 1.9 tapitrisa: http://www.ettoday.net/news/20170321/888582.htm?t=189%E8%90%AC%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E4%BE%86%E5%8F%B0%EF%BC%81%E6%97%A5%E5%AA%92%EF%BC%9A%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%9C%89%E5%A6%82%E3%80%8C%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E5%AE%87%E5%AE%99%E3%80%8D%EF%BC%8C%E9%80%99%E8%A3%A1%E5%B0%B1%E5%83%8F%E5%AE%B6
 4.3 tapitrisa: http://admin.taiwan.net.tw/statistics/year.aspx?no=134
 ‘Heverin'i Neny Ho Adala Aho Manambady Bandy Japoney’ : https://en.wikipedia.org/wiki/Mom_Thinks_I%27m_Crazy_to_Marry_a_Japanese_Guy